မည်သို့ဖြစ်စေ | October 2019
Windows Movie Maker တစ်ဦးကဗီဒီယိုကိုချုံ့ဖို့ကိုဘယ်လို
ချုံ့ရန်ဗီဒီယိုနီးပါးမည်သည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုအယ်ဒီတာ fit ပါလိမ့်မယ်။ ပိုကောင်းသေး, သင်ထိုကဲ့သို့သော program တစ်ခု download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းရန်မလိုပါလျှင်။ Windows Movie Maker ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်များအတွက် Pre-အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကို Windows XP ကိုဗားရှင်းနှင့် Vista ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲရုံးအတွက်စာမကျြနှာ renumber လုပ်နည်း
လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲရုံးနာမည်ကြီးများနှင့်လူကြိုက်များသည် Microsoft Office ကိုနှုတ်မြွက်တော်တစ်ဦးအကြီးအကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုနှင့်ဤအခမဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုအထူးသဖြင့်အချက်များကဲ့သို့ LibreOffice အသုံးပြုသူများသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လုပ်ငန်းဆောင်တာများကျယ်ပြန့်အများစု pagination အပါအဝင်ကမ္ဘာကြီးအိုင်တီကုမ္ပဏီကြီးပေါ်တွင်ကုန်ပစ္စည်းအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ရှိပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး Avira ကနေအပြီးအစီးဖယ်ရှားရေး
သင် antivirus ကို Avira ကိုဖယ်ရှားတဲ့အခါ, များသောအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေရှိပါတယ်။ အသုံးပြုသူတဦးတည်းနောက်ခံလူတည်ထောင်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါထိုအခါမူကား, ထို့နောက်မနှစ်မြို့ဖွယ်အံ့သြဖွယ်များစတင်။ ဒါဟာစံမာစတာ windose တိုင်းလမ်းအတွက်ထို့နောက်များမှာသမျှသောဖိုင်များ, အခြား antivirus ကို system ကို install လုပ်ပါနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။
Clownfish အလုပ်မလုပ်ပါဘူး: အကြောင်းရင်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ
Clownfish - Skype ကိုပေါ်မဲကိုပြောင်းလဲရန်ရေပန်းစားပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာအချို့ကိစ္စများတွင်ပါကစနစ်တကျအလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ, ကို run, ဒါမှမဟုတ်မှားယွင်းမှုတစ်ခုထုတ်လုပ်ရန်မည်မဟုတ်ပါ။ အလုပ် Klounfish နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာကိုစဉ်းစားပါနှင့်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုဖော်ပြရန်။ အဆိုပါ Clownfish Clownfish ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူး Download: အကြောင်းရင်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ Klounfish ၏အသုံးပြုမှုကိုမှအဓိကအတားအဆီး Skype ကိုအပေါ်ဆက်သွယ်သောအခါ, အဆုံးစွန်သော 2013 ခုနှစ်ကတည်းက Clownfish အပါအဝင် Third-party application များနှင့်အတူကန့်သတ်ပူးပေါင်းရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
Tor Browser ကိုအပြေးနှင့်အတူပြဿနာ
Tor ကို browser ကိုအသုံးပြုသူများကနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း update ကိုအပြီးအထူးသဖြင့်သိသာသော program တစ်ခုပြဿနာများ၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူမကြာခဏတွေ့ဆုံရန်စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်ပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်အပေါ်အခြေခံပြီးရပါမည်။ ဒါကြောင့် Tor Browser ကိုအလုပ်မအဘယ်ကြောင့်အများအပြား options တွေကိုရှိပါသည်။ တခါတရံမှာအသုံးပြုသူရိုးရိုးကွန်ပျူတာပေါ်မှာအင်တာနက်ကိုချွတ်, cable ကို pinched သို့မဟုတ်ဆွဲထုတ် (အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လည်းကျိုးကြောင်းမမြင်, တစ်ဦးပံ့ပိုးပေးပြီးတော့ပြဿနာကိုအတော်လေးရိုးရှင်းစွာနဲ့ရှင်းလင်းစွာဖြေရှင်းသည်အင်တာနက် access ကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
လုံးဝသင်၏ကွန်ပျူတာ Adguard ကနေ uninstall လုပ်ဖို့ဘယ်လို
ကြောင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိကြော်ငြာ၏စည်းစိမ်ဖို့ကပိတ်ဆို့ကြောင်း ပို. ပို. လူကြိုက်များအစီအစဉ်များဖြစ်လာရသည်။ Adguard - ထိုသို့သောဆော့ဖ်ဝဲလူကြိုက်အများဆုံးကိုယ်စားလှယ်တဦးတည်း။ အခြားမည်သည့်လျှောက်လွှာများကဲ့သို့ပင် Adguard တစ်ခါတစ်ရံသင်ကွန်ပျူတာကနေ uninstall လုပ်ဖို့ရှိသည်။ ဒီအချက်တွေအမျိုးမျိုးထမ်းဆောင်နိုင်ဘို့အကြောင်းပြချက်။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအရေးအကြီးဆုံးကတော့လုံးဝ Adguard ကိုဖယ်ရှားသင်သည်စနစ်တကျကြဘူး,?
Malwarebytes AntiMalware အစီအစဉ်ကို အသုံးပြု. ဖယ်ရှားခြင်းလောင်းကစားရုံမီးတောင်ကြော်ငြာ
ဗိုင်းရပ်စ်နည်းစနစ်အပေါ်အခြေခံပြီးရှိသူများအပါအဝင်ကြော်ငြာ၏လက်မခံနိုင်နည်းလမ်းများ, အသုံးပြု. ၎င်းတို့၏မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်အတော်များများအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကို။ ဤရွေ့ကားအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ "မီးတောင်" ၏ကြော်ငြာများတွင်အသုံးပြုသည့်နည်းပညာများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအသုံးပြုသူရဲ့ browser ကိုအထဲသို့ဝင်သော, ပြီးတော့အဆက်မပြတ်ဒီလောင်းကစားရုံ၏ pop-up ကြော်ငြာတွေသူ့ကိုလိုက်ရန်စတင်။
OpenOffice စာရေးဆရာအတွက်စာရွက်စာတမ်းများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ။ မာတိကာ
အဆိုပါကြီးမားတဲ့အီလက်ထရောနစ်စာမျက်နှာများကိုအများကြီးပါဝင်သည်ပေးသောစာရွက်စာတမ်းများ, အပိုင်းများနှင့်အခန်းကြီးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အကြောင်းအရာများကိုမပါဘဲလက်ျာသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေကြောင့် re-ကိုဖတ်ရှုတစ်ခုလုံးကိုစာသားကိုရန်လိုအပ်ပါသည်ကတည်းကပြဿနာဖြစ်တာတွေရပ်စဲ။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်အလိုအလျှောက်ထုတ်ပေးသည်ကဏ္ဍများနှင့်အခန်းကြီး၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အဆင့်ဆင့်ထွက်အလုပ်လုပ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ sub-ခေါင်းစဉ်များအတွက်စတိုင်များဖန်တီး, ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာများကို၏စားပွဲတစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
ကွန်ပျူတာနှင့် gadget ကကုမ္ပဏီ Apple က (iPhone, iPad, iPod) အကြားရဆုံးရိုးရှင်းတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးအထူးအစီအစဉ်ကို iTunes ကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ကို Windows, running အတော်များများကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအပေးထားသော operating system အတွက်, iTunes ကိုအဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်ကိုသို့မဟုတ်မြန်နှုန်းမကြောင်းသတိပြုပါ။
သင်သည်အဘယ်သို့ Corel Draw ကို run မရကြပါလျှင်လုပ်ဖို့
အခြားမည်သည့် Corel Draw အစီအစဉ်မှာ startup မှာအသုံးပြုသူမှပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်လိုပဲ။ ဒါကရှားပါးပေမယ့်မနှစ်မြို့ဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောအပြုအမူများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုစဉ်းစား, ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများကိုဖော်ပြရန်။ အများစုကတော့ထိုပြဿနာကိုမလျော်ကန်သောတပ်ဆင်ခြင်း, ပျက်စီးသွားသောသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးသည့်စနစ်ဖိုင်တွေနဲ့ registry ကိုအစီအစဉ်ကိုဖြစ်စေနဲ့ဆက်စပ်ပရိုဂရမ်ကိုစတင်အဖြစ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအသုံးပြုသူများကန့်သတ်။
HDD ပွနျလညျ: အခြေခံလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်
ကံမကောင်းစွာပဲဘာမှကွန်ပျူတာ hard drives တွေကိုအပါအဝင်အစဉ်အမြဲကြာရှည်ခံသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့ထို့ကြောင့်လည်းကျိုးကဏ္ဍများနှင့်, အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း၏ဆုံးရှုံးမှု၏အသွင်အပြင်ကိုအထောက်အကူပြုရန်သော degaussing ကဲ့သို့သောအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ရပ်အကြောင်းမဲ့နိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်ဤပြဿနာများရှိပါကရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ 60% အတွက်ကွန်ပျူတာ၏ hard disk ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်, developer များအတိုင်း, utility ကို HDD သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးကူညီပေးပါမည်။
ထို program ကို Notepad ထဲမှာ regular expressions ကိုအသုံးပြုခြင်း ++
Programming - မဟုတ်ဘဲရှုပ်ထွေး, ဝီရိယစိုက်နှင့်ခဲအတူတူပင်, ဒါမှမဟုတ်အလားတူ, action ကိုပြန်လုပ်ပါရန်ရှိသည်မဟုတ်သည့်အတွက်မကြာခဏ monotonous ဖြစ်စဉ်ကို။ အလိုအလျောက်နှင့်အရှိန်အဟုန်မြှင်ရှာဖွေရေးနှင့်စာရွက်စာတမ်းအလားတူ element တွေကိုအစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ပရိုဂရမ်းမင်း regular expressions ကိုတစ်ဦးစနစ်ဖြင့်တီထွင်ခဲ့သည်။
CorelDRAW အတွက်ဖောင့်ကို install လုပ်နည်း
CorelDRAW လူကြိုက်အများဆုံးအားနည်းချက်ကိုအယ်ဒီတာများတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတော်လေးမကြာခဏ program နဲ့အလုပ်၌သင်တို့ကိုအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အခြားပုံရိပ်တွေများအတွက်လှပသောတံဆိပ်များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြု, စာသားကိုသုံးနိုင်သည်။ ကို default font ကိုဒီဇိုင်းဖွဲ့စည်းမှုနဲ့အညီမဖြစ်တဲ့အခါ, သူက Third-party ရွေးချယ်စရာသုံးစွဲဖို့လိုအပ်သည့်ဖြစ်လာသည်။
Adobe Reader, DC ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
တချို့ကအစီအစဉ်များကိုသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်အခါစံဖယ်ရှားရန်အတွက် Windows မှန်ကန်စွာဖယ်ရှားမည်မဟုတ်ပါ။ ဤသည်ကိုအများဆုံးကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များဖြစ်နိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့မှန်မှန်ကန်ကန် Revo Uninstaller ပရိုဂရမ်ကိုသုံးပြီး Adobe Reader အားဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံကြည့်ပါ။ ဒါဟာစနစ်ဖိုလ်ဒါနဲ့ registry ကိုအမှားအယွင်းများမ "အမြီး" စွန့်ခွာ, လုံးဝ applications များဖယ်ရှားပေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့အစီအစဉ်ကို Revo Uninstaller ကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မယ် Adobe Reader, DC uninstall လုပ်ဖို့ဘယ်လို Revo Uninstaller download လုပ်ပါ။
Illustrator တစ်ပုံစံ Make
Pattern - အတော်ကြာတူညီပါဝင်သည်ဟုတစ်ပုံစံ, ရုပ်ပုံများများပြားလာ၏။ ပုံရိပ်တွေမတူညီတဲ့ထောင့်မှာလှည့်, ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်, အရွယ်အစား၏နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့များပြားဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှလုံးဝတူညီဆက်လက်တည်ရှိမည်, တချို့အရွယ်အစား, အရောင်နှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောထောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲသွား။
မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်း - ကရိုးရှင်းပေမယ့်တချို့အသိပညာနှင့်သတိထားလိုအပ်သည်။ ဒီအလုပ်အကိုင်အဖို့အရည်အချင်းချဉ်းကပ်တခါတရံချို့တဲ့နေသောကောင်းတစ်ဦးစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု, ပေးပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်, သင် BIOS ကနေတဆင့် CPU ကိုမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီမဖြစ်နိုင်ပါဒါမှမဟုတ်သင်က Windows အောကျမှတိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်သုံးစွဲချင်လျှင်, အထူးဆော့ဗ်ဝဲသုံးစွဲဖို့ သာ. ကောင်း၏။
အခုတော့နီးပါးတိုင်းကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူအင်တာနက် access ကိုရှိပါတယ်။ ဝဘ်ဘရောက်ဇာကနေတဆင့်အတွက်သတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးရှာပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုပရိုဂရမ်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးတဦးတည်းနှင့်အတူတူပင်နိယာမအဘို့အပြေးပေမယ့် interface နဲ့အပိုဆောင်း tools များအတွက်ကွာခြား။ ယနေ့တွင်ငါတို့သည်သင်တို့၏ PC ကိုဘရောက်ဇာပေါ်တွင် install ဖို့ဘယ်လိုပေါ်မှာငါတို့ဆောင်းပါးကိုသွားပါလိမ့်မယ်။
Configuring CCleaner ပရိုဂရမ်
CCleaner ပရိုဂရမ် - မလိုအပ်သောအစီအစဉ်များနှင့်စုဆောင်းအပျက်အစီး၏ကသင့်ကွန်ပျူတာသန့်ရှင်းရေးများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုယင်း၏လက်နက်တိုက်အတွင်းနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သည်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိ, သင့်ကွန်ပျူတာသန့်ရှင်းရေးလိမ့်မည်ဟု tools တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီတူညီတဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာအကြှနျုပျတို့ကိုပရိုဂရမ် settings ကို၏အဓိကအချက်များကိုဆွေးနွေးကြမည်။
Fb2 format နဲ့ caliber အတွက်စာအုပ်တွေကိုဖတ်ပါ
ဤဆောင်းပါးသည်ကိုသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြဿနာများမရှိဘဲထိုသို့ပြုမှခွင့်ပြုသောပေါင်းစုံ caliber အစီအစဉ်ကိုသုံးပြီးကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပုံစံ * .fb2 နှင့်အတူစာအုပ်ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။ caliber - မေးခွန်းပြန်ပြောထားတဲ့မသာသင့်ရဲ့စာအုပ်တွေတစ် repository ကို, ဒါပေမယ့်လည်းသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုအဆိုပါကွန်ပျူတာပေါ်တွင်စာအုပ်တစ်အုပ် fb2 ဖွင့်ဖို့ဘယ်လို?" ။
မီဒီယာယခုအချိန်တွင်ခြောငျးကို client မှာအများဆုံးအဆင်ပြေဆုံးနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရရှိသွားတဲ့။ ဒါကြောင့်အားဖြင့်သင်တို့ကိုမြန်နှုန်းမြင့်မှာ torrent ကနေတစ်ဆင့်အင်တာနက်ထဲကနေဖိုင်တွေအမျိုးမျိုး upload တင်နိုင်ပြီး, တစ်ချိန်တည်းမှာသူကတခြားအားသာချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဤဆောင်းပါးကိုငါတို့သည် MediaGet ရုပ်ရှင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။